Miarahaba Jejoo ! Ny vehivavy miaraka amin’ny vadin'olona dia tsy araka ilay eritreretin’ny maro foana hoe manataka, ratsy toetra, …
fa tena faran’izay mijaly sy mihafy ara-pitiavana satria efa potipotiny sy efa manan-tompo no iarahana. Ny fo anefa rehefa tia dia tsy mifidy izay iantsapazana. izaho dia manantena fa hihaona amin'’lay tena sahaza ahy indray andro any ka mangataka torohevitra hanadinoko ilay vadin’olona sy hahitako solony ho tiavina. Misaotra
“Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo”… hatraiza no fetrany?
Teny miverimberina ao anatin’ny soratra masina ny hoe : « ianareo vehivavy maneke ny vadinareo ». Araka ny soatoavina malagasy ihany koa dia ny lahy no lohan’ny vavy.
Tandremo, mahadondrona ny ankizy ny Facebook!
Manomboka 13 taona dia efa afaka manao facebook, raha ny lalana napetrak’ity tambajotram-tserasera ity.
Siramamy = Homamiadan’ny nono
Singa tsy tsara ho an’ny fahasalamana ny siramamy raha be loatra. Araka ny fikarohana nataon’ireo mpitsabo hatrany am-pita dia ahiana ho mitarika ny homamiadan’ny nono eo amin’ny vehivavy ny fihinanana sakafo mamy loatra na nasiana siramamy matetika. Mety hanimba ny havokavoka mihitsy aza izany raha ny fikarohana ihany.
Mialy Rajoelina : Mahay misafidy akanjo
Efa hatramin’izay no manintona ny maso ny fomba fiakanjon’i Rajoelina Mialy, vadin’ny filoham-pirenena. Ary isaky ny misy zavatra alehany dia azo lazaina fa voafehiny ny fisafidianana ireo akanjo izay anaovany.
Mahavoan’ny “cancer” ny silipo “dentelle”
Saropady ny fivavian’ny vehivavy. Ankoatra ny otrikaretina, bakteria, virosy vokatry ny loto mety hahatonga aretina, dia tsy mahasalama azy ihany koa ny atin’akanjo « synthetique » sy « dentelle ».
Ny fizotran’ny régime
Fito andro ihany no hanarahana an’ity régime ity ary voafaritra tsara avokoa ny karazan-tsakafo hanina isan’andro. Natoraly avokoa ny sakafo hanina fa tsy mihinana sakafo vita voatra ara-indostrialy mihitsy. Mahazo mihinana menaka sy sira, fa amin’ny fatra kely. Tsy mihinan-tsiramamy kosa ary tsy maintsy misotro rano tsara foana isan’andro. Mahavery hatrany amin’ny 5 kilao izy ity, raha voahaja tsara.
Ny sakafo hanina mandritra ny régime
Andro voalohany : andron’ny voankazo
Voankazo ihany no hanina amin’ny sakafo telo lehibe amin’ity andro voalohany ity. Azo ampidirina ao avokoa ny voankazo tiana, toy ny papay, paoma, mananasy sy ny maro hafa. Tsy atao amin’ny alina fotsiny ny akondro.
Andro faharoa : Andron’ny legioma
Amin’ity andro faharoa ity dia legioma fotsiny no azo hanina. Azo atao sakafo maraina, ohatra ny ovy nomasahana. Amin’izay dia manana ny tontolo andro ny vatana handravana ny gliosida entiny. Aza adinoina ny mihinana legioma be fibra, toy ny “broccoli” sy ny “haricots verts”.
Andro fahatelo : andron’ny legioma sy voankazo
Amin’ity andro fahatelo ity dia azo ampiarahina ny fihinanana legioma sy voankazo. Ianao ihany no mandamina azy.
Andro fahefatra : andron’ny ronono sy ny akondro
Akondro sy ronono ihany no hanina mandritra ny tontolo andro. Azoo atao ny mihinana akondro hatramin’ny 10 isa. Fero ho 3 vera kosa ny ronono.
Andro fahadimy : andron’ny hena
Amin’ity andro ity no afaka mihinana hena. Mety foana na hena mahia na nofon’akoho na trondro. Azo ampiarahina amin’ny voataba 8 izany, atao lasary. Tokony hisotro rano betsaka manokana amin’ity andro ity, mba hanintsanana ny asidra avy amin’ny hena.
Andro fahenina : andron’ny hena sy legioma
Amin’ity andro ity dia hena sy legioma no atao sakafo antoandro. Legioma no hanina, ankoatra izay.
Andro fahafito : legioma sy vary
Amin’ity andro farany ity dia legioma sy voankazo no hanina ary mahazo mihinam-bary koa fa tsy maintsy vary mena, satria ireny no be otrikaina.